सुगर देखि नआत्तिनुहोस् ‘यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ’ डा‍. ज्योती भन्छिन् ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौ । डा‍. ज्योती भट्टराई मधुमेह रोगको सन्र्दभमा निक्कै चर्चित नाम हो । उहाँले थुप्रै मधुमेह रोगीलाई उपचार सेवा दिइसक्नुभएको छ । उहाँले यो रोग नियन्त्रणका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको हुनुहुन्छ । अचेल उहाँको मेट्रो काठमाडौं अस्पतालमा मधुमेह भएर गएपछि हरेकले ‘डाइट क्लास’ लिनैपर्छ। यो कक्षामा डाइटिसियनले मधुमेह भएपछि के खाने, के नखाने, मात्रा मिलाएर कसरी खाने आदिबारे जानकारी दिन्छन्।‘हामीकहाँ मधुमेह भएपछि यो पनि खान हुन्न, त्यो पनि खान हुन्न भनेर शरीर कमजोर बनाएर आउने धेरै छन्’, डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले यस्ता बिरामीका लागि काउन्सिलिङ जरुरी छ भनेर नियमित कक्षा लिन लगाउँछु।’
डा. ज्योतिका अनुसार यसको परिणाम असाध्यै राम्रो आएको छ। ‘हुन त यो हामीले शुरु गरेको एक महिना पनि भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर एक सातामै यसको परिणाम देखिन थालेको छ।’उहाँका अनुसार यो उपचारात्मक खाना उपचार विधि मोटोपन बढी भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याइएको हो। ‘जो व्यक्ति मोटा छन्, उहाँहरूलाई सुगर नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक ८०० मात्र क्यालोरी भएको खानाको चार्ट दिन्छौँ’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘यसमा भात, रोटी, तरकारी र फलफूल सबै पर्छन्। तर क्यालोरी लिमिट भने क्रस गर्न पाइँदैन।’